Tilmaamaha Safarka Chiang Mai Xalaal - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Waxaa la aasaasay 1296 CE, Chiang Mai waa magaalo dhaqan ahaan iyo taariikh ahaanba xiiso leh, hal marna waa caasimada boqortooyadii hore ee Lanna. Meelaha dhaadheer ee Himalayas 700 km waqooyiga ka xigta Bangkok, illaa iyo 1920-meeyadii waxaa kaliya oo lagu gaari karaa safar webiga oo dhib badan ama maroodiga maro. Go'doomintaas ayaa gacan ka gaysatay sidii loo ilaalin lahaa soo jiidashada Chiang Mai, oo weli taagan.
Xarunta taariikhiga ah ee Chiang Mai waa magaalo deyrar leh ("Magaalo" waa chiang lahjadda woqooyiga Thai halka May waa "cusub", markaa Chiang Mai waxaa loo tarjumay "magaalo cusub"). Qeybaha derbiga ee dib u soo celinta dhowr iyo toban sano ka hor waxay ku sii jiraan albaabbada iyo geesaha, laakiin inta kale mootada ayaa hadhay.
Gudaha Chiang Mai inta hartay gidaarradeedu waa in ka badan 30 macbudyo ah oo ku saabsan aasaaskii aasaaska, iskudhafka qaababka Burmese, Sri Lankan, iyo Lanna Thai, oo lagu qurxiyay sawir gacmeedyo qurxoon, jaranjarooyinka Naga, leonine iyo ilaaliyayaasha malaa'igta iyo pagodas oo lagu dhejiyay dahab dahab ah. Tan ugu caansan waa Wat Phrathat Doi Suthep, oo magaalada ka fiirisa buur 13 km u jirta.
Chiang Mai-casrigan casriga ah wuxuu ku fiday dhinac walba, laakiin gaar ahaan dhanka bari ilaa iyo bangiyada Wabiga Ping (Mae Nam Ping), halkaas oo Wadada Changklan, caanka ah Habeenkii baararka, iyo inta badan hudheelada Chiang Mai iyo guryaha martida ayaa ku yaal. Wadada Loi Kroh (ถนน ลอย เคราะห์) waa Xarunta nolosha habeenkii (dalxiis) ee magaalada.
Dadka deegaanku waxay yiraahdaan inaadan soo marin Chiang Mai ilaa aad ka aragto aragtida Doi Suthep, waxaad cuntay baaquli kao soi ah waxaadna ka iibsatay dalad Bo Sang. Dabcan kani waa dalxiis dalxiis, laakiin kao soi, dalladaha Bo Sang iyo Doi Suthep waa astaamo dhaqameed muhiim u ah dadka deegaanka.
gudaha Chiang Mai
Dalxiiska Dalxiiska 'Angkhang Nature Resort Chiang Mai'
Hoteel Artiyo Webi xeeb ah
Away Suansawan Chiang Mai, Uruurinta Boutique Centara
BaanNamPing Riveride Village Hotel Chiang Mai
Hoteelka Banthai Village Chiang Mai
Guri Gallery House Chiang Mai
Hotel CH Chiang Mai
Hoteelka Chiangmai Gate
De Chai Hotelka Gumeysiga
Hoteelka De Lanna Chiang Mai
Hoteelka Dusit D2 Chiang Mai
Afar xilli oo dalxiis Chiang Mai
Hoteelka Furama Chiang Mai
Hotel FX Royal Panerai Chiang Mai
Hotel Fx Royal Peninsula Chiang Mai
Tuulada Horizon & Dalxiis Chiang Mai
Hoteelka M Chiang Mai
Dalxiis caafimaad ee Jirung Chiang Mai
Hoteelka Kantary Hills Chiangmai
Dalxiiska Khum Phaya & Spa, Centara Boutique Collection Chiang Mai
Dalxiiska Kireethara Boutique Resort Chiang Mai
Hoteelka Kodchasri Thani Chiangmai
Guriga Martida ee Lai-Thai Chiang Mai
Guriga Lanna Chiang Mai
Tuulada Manathai Chiang Mai
Hoteelka Maninarakorn Chiang Mai
Qolalka Mo Chiang Mai
Na Tara Deganaanshaha Gaarka ah Chiang Mai
Dalxiiska Dabiiciga ah ee 'Wellness Resort & Spa Chiang Mai'
Hotelka Cusub ee Mitrapap Chiang Mai
Dalxiis Oasis Baan Saen Doi Spa
Dalxiiska Panviman Chiang Mai
Hoteelka Parasol Inn Chiang Mai
Hoteelka Puripunn Baby Grand Boutique Chiang Mai
Guriga Rachamankha Flora Chiang Mai
Hoteelka Rainforest Boutique Chiang Mai
Hotelka Wareega Wareega ee raaxada Chiang Mai
Dalxiiska Wareegga Dalxiiska & Spa Chiang Mai
Tuulada Chiang Mai
Ruen Kaalay Hoteelka Chaing Mai
Guriga Sawasdee Chiangmai
Hotel Sira Chiang Mai
Hotel SiriLanna Boutique Chiang Mai
Dalxiiska Siripanna Villa & Spa Chiang Mai
Dalxiiska Sri Ping Chiang Mai
Dalxiiska Taraburi & Spa Chiang Mai
Shaaha Vana Hotel Chiang Mai
Huteelka Dalxiiska ee Chiang Mai
Goobta Dalxiiska ee 'Athitan Boutique Resort' Chiang Mai
Dalxiiska 'Chai Lai Orchid Resort' Chiang Mai
Dalxiiska Chedi Chiang Mai
Hoteelka Eurasia Chiang Mai
Naadiga Imperial Resort Spa & Sports Club Chiang Mai
Hoteelka Park ee Chiang Mai
Hotelka yar ee Chiang Mai
Dalxiiska Dalxiiska 'Spa Chiang Mai Resort'
Veranda Chiangmai Waa Dalxiis Sare
Guriga Vivacity Chiang Mai
Shalay Tuulada Chiang Mai
eHalal Safarka Mart > Socdaalka Xalaal ee Thailand > Tilmaamaha Safarka Chiang Mai Xalaal
Tilmaamaha Safarka Xalaal ee Istanbul